Mahatalanjona Holiday Tour | Antsoy @ + 91-993.702.7574 ho an'ny fandefasana.
Mahatalanjona Holiday Tour
Himachal, tany izay manakorontana ny fanahinao. Sambatra amin'ny hatsaran-tarehy voajanahary, i Himachal Pradesh dia paradisa mpizahantany. Ilay Amazing Himachal Holiday Tour dia hitondra anao mandritra ny androm-piainany. Ny fitsangatsanganana, ny ony rafting, ny fiakarana an-tongotra, ny paragliding, ny fihoaram-pefy ary ny maro hafa koa dia azo atao Himachal, ka hanome anao fahafahana hiaina ny faritra amin'ny lamaody samihafa ary hamorona fahatsiarovana izay ankamaminao amin'ny androm-piainanao. Ankoatra ny zava-niainana, misy ihany koa ny fahafahana hankafy ny hakanton'ny tanimbary voajanahary ao Himachal. Ary Mahatalanjona Holiday Himachal Holiday Tour no fomba tsara indrindra hankafizana ny hakanton'ilay tontolo. Ity toerana mahafinaritra ity dia voaravaka amin'ny natiora miaraka amin'ireo tendrombohitra fotsy madio fotsy, ny fofona mahagagan'ny hazo kesika, ny tontolo iainana mahavariana. Na mpihinana tantely ianao na te-handany fotoana tsara amin'ny fianakavianao, namana amin'ny fialantsasatra; Ity toerana ity dia mitazona zavatra ho an'ny rehetra. Araho ny hakanton'ireo havoana amin'ny heriny manontolo amin'ny Amazing Himachal Holiday Tour. Ny fanjakana dia mifototra amin'ny fahasamihafany manerantany sy ny hatsaran'ny natiora mahafinaritra. Ny tany Himachali dia manana onja maivana toy izany izay manintona ireo mpankafy ny zavaboary manerantany. Explore this land amazing with our Amazing Holiday Himachal Holiday Tour.
CHANDIGARH (SHAMLA) - MANALI (1NTS) - DHARAMSHALA (2NT) - DALHOUSIE (3NTS) - AMRITSAR (1NT) - CHANDIGARH
Programan'ny 10 Nights | Tour Code: 150
Rehefa tonga tany amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Chandigarh dia manangòna ​​ary mitondra fiara ho an'i Shimla. Shimla, renivohitry Britanika fahiny, no napetraka teo anelanelan'ny Tendrombohitra Shivalik nafanaka, nanolotra ny sasany amin'ireo fomba fijery mahatalanjona indrindra amin'ny Himalaya mahery. Rehefa tonga any amin'ny hotely i Shimla. (Alina ao Shimla)
Androany aorian'ny fandaharam-potoana dia mandalo fitsangatsanganana ao sy manodidina an'i Shimla ary mitsidika an'i Kufri. Mivoatra any amin'ireo toerana 2,622 ny Kufri, malaza amin'ny fialamboliny sy ny lalan-drivotra, ary ny rindrin'ny lanezy amin'ny alàlan'ny fiaramanidina sy ny fandalovan'ny rivodoza. Manaraka fitsangatsanganana an'i Shimla ny tolakandro, mamangy ireo havoana Jakoo izay manolotra fijerena mijery ny tanàna, ny Vice Regal Lodge na mandeha eny an-dalana. (Alina ao Shimla)
Ity andro ity aorian'ny sakafo maraina Andramo ary alaivo i Manali. Enroute ny fakantsarinao, maka sary ny toerana malaza toy ny reniranon'i beas, kullu valley, dashehra maodely sns. Rehefa tonga ny hiditra ao amin'ny hotely. Manali dia sary tsara tarehy an-tendrombohitra eo an-tampon'ny metron 1,929 napetraka eo anelanelan'ny tendron'ny ala maitso, ny hatsaran-tarehin'i Manali dia manaloka ny reniranon'i beas miaraka amin'ny rano madio, mamakivaky ny tanàna. Ny manodidina ny iray dia mahita ny deodar sy ny pine, ny tanimbary madinika ary ny saham-boankazo. Ny takariva maimaim-poana ho an'ny hetsika manokana (Manara-maso ny alina).
Androany aorian'ny fandehanan'ny sakafo maraina ho an'ny toeram-pisakafoanana any Manali, tsidiho ny tempoly 450 taona natokana ho an'i Hadimba Devi, izay mampiseho hazo tena tsara. Tsidiho ihany koa ny Tempolin'i Manu sy Vashisht Kund, fantatra amin'ny loharano mafana ao aminy. Ny takariva maimaim-poana hividy ny tsenan'ny Tibetana eo an-toerana. (Manara-maso ny alina).
DAY 05: MANALI (FANABEAZANA)
Androany aorian'ny fandalovan'ny sakafo maraina dia mankany Snow Point ao amin'ny lalana Rohatang. Enoute hijanona ao Solang vallwy. Ny lalana Rohtang (metatra 3940 metatra) dia 51 kms avy any Manali, saingy noho ny làlan-dranomandry feno lanezy dia tsy azo ekena io lalana io raha ny efa ho ny 8 volana amin'ny taona. Hiverina any Manali ary haka fotoana malalaka ho an'ny fialam-boly tsirairay. Raha mikatona ny lalana mankany Rohtang Pass dia tsidiho ny Snow Point (azo ampiasaina mivantana ny soavaly / soavaly). Manara-maso any Manali.
DAY 06: MANALI TO DARAMASALA
Kilaometatra kilometatra kilometatra 260 eny an-dalamben'i Baijnath fantatra ho an'ny Tempolin'i Shiva ary mbola ao Palampur malaza hoe Tea Tea Garden. Dharamhsala dia onjam-peo eo an-tokotanin'ny Tendrombohitra Dhauladhar eo amin'ny 18 kms avaratra-atsinanan'i Kangra, fantatra ho ny hatsaran-tarehiny maniry ao anaty hazo sy hazo oak. Hatramin'ny 1960, fony izy lasa Foiben'ny Tempolin'i The Dalai Lama, dia nitsangana i Dharamshala ho an'ny laza iraisam-pirenena ho "The Little Lhasa ao India". O / N Hotel
Rehefa avy misakafo avy any Dharamshala mankany Dalhousie rehefa avy nanao ny toerana misy ny toeram-ponenana ao an-toerana, ny fahamasinan'i Dalai lama ao Mc Leodgunj, fahatsiarovana ny ady, ny tempoly Bhagsunath ary ny Dal Lake. Reach Dalhousie amin'ny hariva. O / N Hotel
Dalhousie dia nantsoina taorian'ny Governora Britanika - tamin'ny taonjato faha-XXX, Lord Dalhousie. Voahodidina zavamaniry isan-karazany - kesika, dodders, oaks ary rhododendron voninkazo. Ny fitsidihana an-toerana an'i Dalhousie dia ahitana fitsidihana an'i Panjipula, Subhash Baoli ary fitsangatsanganana ho an'ny Khajjiar 9 km avy any Dalhousie voahodidin'ny ala Deodar matevina. Ny fiara manomboka amin'ny Dalhousie ka Khajjiar dia mahafinaritra. O / N Hotel
Rehefa tapitra ny sakafo maraina dia jereo ny hotely ary alefaso any Amritsar. Avy eo dia nitsidika ny Tempolin'i Golden, Jalyanwala Bagh & Waga Border. Nandritra ny alina tao Amritsar.
Ity andro manaraka ny sakafo maraina Andramo ka alaivo i Chnadigarh. Rehefa tonga tany Chandigarh famindrana mba hiditra an-tsokosoko. Nandritra ny alina tao Chandigarh.
DAY 11: CHANDIGARH - FITSARANA
Ity andro manaraka ny sakafo maraina, mijery ny Hotel ary mandehana mankany amin'ny fitsidihan'i Chandigarh. Tsidiho ny Rock Garden. Ny fidirana tsy misy fitenin-dry zareo dia mitarika amin'ny fikarakarana vato, vatolampy, tapa-damba, tsy misy mahasolotena, tsy misy saro-piaro, vato, kapoaka, tapa-pandrefesana, saribakoly, fiainam-pianakaviana, vehivavy ary tempoly. Tafaverina any amin'ny seranam-piaramanidina fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Chandigarh any amin'ny faritry ny seranana.